Ooredoo Next Myanmar ဆိုသည်မှာ အူရီဒူးဝန်ဆောင်မှုများ ကို မိတ်ဆွေရဲ့ Facebook Messenger မှတဆင့် စီမံခန်.ခွဲနိုင်သည့် channel လေးတခုဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ၏ ဖုန်းငွေလက်ကျန်များကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊ အင်တာနက်အစီအစဉ်များ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအစီအစဉ်များကို ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ မိတ်ဆွေအတွက် သီးသန့် My Ooredoo My Offer (MOMO) များကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း နှင့် ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း တို.ကို Ooredoo Next တွင် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Ooredoo Next ကိုဝင်ရောက်ရန် ကလစ်တချက်သာ နှိပ်ဖို.လိုပါတယ်နော်။ Ooredoo Next ကိုရောက်တာနဲ. အူရီဒူးရဲ. ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများကို အလွယ်တကူ စီမံခန်.ခွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကုတ်ဒ်နံပါတ်ကိုမှ မှတ်မိစရာမလိုပဲ QR code ကို scan ဖတ်ရုံဖြင့် (သို.) http://ore.do/omnext ကို နှိ်ပ်လိုက်ရုံဖြင့် Ooredoo Next ထဲသို.ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ရိုးရှင်းတယ် ၊ မြန်ဆန်တယ် ၊ လွယ်ကူတယ်
Ooredoo Next Myanmar ဆိုတာဘာလဲ။
Ooredoo Next Myanmar ဆိုတာ မိတ်ဆွေရဲ့ ဖုန်းငွေလက်ကျန်များကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအစီအစဉ်များကို ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ မိတ်ဆွေအတွက် သီးသန့် My Ooredoo My Offer (MOMO) များကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း နှင့် ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း တို.ကို မ်ိတ်ဆွေရဲ့ Facebook Messenger မှ တဆင့်အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်သည့် channel တခုဖြစ်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် application တခုခုကို ဒေါင်းလုတ်လုတ်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် Facebook messenger application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို. လိုအပ်ပါသည်။ Facebook messenger application ကို Play store သို. App store မှဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။
QR code ကို အသုံးပြုပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို မည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။
QR code သည် Ooredoo Next ကို ရယူဖို. အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
Facebook Messenger App ကိုဖွင့်ပါ။
Messenger App ထဲမှ ကင်မရာကိုဖွင့်ပါ။
QR code နေရာကို ကြာကြာဖိထားပြီး code scan ဖြစ်သည်အထိစောင့်ပါ။
Scan ဖတ်ပြီးတာနဲ. Ooredoo Next ထဲသို့ တိုက်ရိုက် ရောက်ရှိသွားပါမည်။
Get Started ကိုနှိပ်ပါ။
Code ကို scan ဖတ်လို.မရပါ။ Ooredoo Next ကိုတခြားနည်းဖြင့် ရယူနိုင်ပါသေးသလား။
Ooredoo Next ကို အောက်ပါ နည်းလမ်းမျာဖြင့်လည်း ရယူနိုင်ပါသည်။
Facebook Messenger application မရှိပါက app ကိုအရင် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ။
Messenger search bar မှာ ‘Ooredoo Next Myanmar’ ဟုရှာပါ။
Ooredoo Next Myanmar မှာ ဘာတွေအသုံးပြုလို့ ရသလဲ။
Ooredoo Next Myanmar တွင် အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းငွေလက်ကျန် စစ်ဆေးခြင်း ၊ အင်တာနက်လက်ကျန်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု မိနစ်လက်ကျန် နှင့် SMS လက်ကျန်များ ကိုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
အင်တာနက်အစီအစဉ်များ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအစီအစဉ်များကို ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း
My Ooredoo My Offer (MOMO) များကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း နှင့် ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း
“ပိုမိုသိရှိရန်” ကိုနှိပ်ပြီး အစီအစဉ်တခုချင်းစီရဲ့ မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ကိုကြည်.ရှုနိုင်ခြင်း
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို Messenger မှတဆင့် sharing လုပ်နိုင်ခြင်း တို.ကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် စာရင်းသွင်း ဖို့လိုအပ်ပါသလား။
၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် စာရင်းသွင်း ဖို့မလိုအပ်ပါ။
၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် မည်မျှ ကုန်ကျမည်နည်း။
၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် Messenger ကိုအသုံးပြုသော အင်တာနက်ခသာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Wi-Fi ဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Wi-Fi ဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဖုန်းငွေစစ်ဆေးခြင်း၊ အစီအစဉ်များဝယ်ယူခြင်းနှင့် တခြားဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန် အူရီဒူးဆင်းမ်ကတ်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
Ooredoo Next Myanmar ကို မည်သုအသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
Facebook messenger application ကိုအသုံးပြုသူမည်သူမဆို Ooredoo Next Myanmar ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းငွေစစ်ဆေးခြင်း၊ My Ooredoo My Offer စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အစီအစဉ်များဝယ်ယူခြင်း အစရှိသော အဓိက ၀န်ဆောင်မှုတွေကိုတော့ အူရီဒူးသုံးစွဲသူများသာလျှင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ၀န်ဆောင်မှုသည် အူရီဒူးသုံးစွဲသူများအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှု တခုလုံးကို အပြည့်အ၀အသုံးပြုနိုင်ရန် အူရီဒူး ဆင်းမ်ကတ်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
Messenger application ကိုအသုံးပြုရာတွင် သုံးသလောက် ဒေတာခ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုဖော်ပြပါအချက်တို့နှင့်ပတ်သက်ပါက အူရီဒူးမြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် လိုအပ်သလိုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအားဖြင့် အချိန်မရွေးပြုပြင်ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့် (သို့) အချိန်မရွေးရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်သည် အူရီဒူးမြန်မာလက်ဝယ်တွင်ရှိသည် ယခုဖော်ပြပါအချက်တို့နှင့်ပတ်သက်ပါက အူရီဒူးမြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် လိုအပ်သလိုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအားဖြင့် အချိန်မရွေးပြုပြင်ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့် (သို့) အချိန်မရွေးရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်သည် အူရီဒူးမြန်မာလက်ဝယ်တွင်ရှိသည် ယခုဖော်ပြပါအချက်တို့နှင့်ပတ်သက်ပါက အူရီဒူးမြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် လိုအပ်သလိုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအားဖြင့် အချိန်မရွေးပြုပြင်ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့် (သို့) အချိန်မရွေးရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်သည် အူရီဒူးမြန်မာလက်ဝယ်တွင်ရှိသည်။